Quick Delivery - Terms and Conditions
“လုပ်ငန်းအပ်နှံသူ၏ သိရှိလိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များနှင့် တာ၀န်များ”
သတ်မှတ်အရွယ်စားဖြစ်သော ၁’ x ၁’ ပတ်လည် (Size) နှင့် 2KG (Weight) Limit ဖြစ်ပါသည်။ကျော်လွန်ပါက သတ်မှတ်ချက် စျေးနှုန်းများအတိုင်း ကောက်ခံမည်ဖြစ်ပါသည်။
Regular packaging is limited in size of 1’ 1’ around and 2KG in weight. Additional charges will be charged if the packaging exceeds the regular limit.
ပစ္စည်းပို့ဆောင်လိုပါက အနည်းဆုံး မနက် (၁၁)နာရီ ထိ ကြိုတင် ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ရန်လိုအပ်သည်။
Customer are required to submit the item they wish to deliver 11:00 AM prior to morning.
ပစ္စည်းပို့သူမှ သေချာစွာစီစစ်ထုတ်ပိုး၍ လိပ်စာအတိကျနှင့် ဆက်သွယ်ရမည့် ဖုန်းနံပတ်မှန်ကန်စွာ ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။
The Item shipper has to make extra sure they pack the item carefully and the address and contact number provided is correct.
ကွဲကြေလွယ်သော ပစ္စည်းများ ၊ပျက်စီးလွယ်သော ပစ္စည်းများ ၊ ပုတ်သိုးလွယ်သော ပစ္စည်းများကို သေချာစွာထုတ်ပိုး မှာကြားရန်နှင့် အညွန်းသေချာစွာ ညွန်းဆိုပေးပါရန် လိုအပ်ပါသည်။
The sender has to specify whether the item is Fragile, Perishable Foods and if yes, the sender has to pack it carefully, order and label the details.
ပစ္စည်းပို့ဆောင်နေချိန် Packing ပျက်စီးခြင်းမှ အပ မူလပစ္စည်း(အတွင်း)မှ ပစ္စည်းပျက်စီး/ ပျောက်ဆုံးခြင်းကို လုံး၀တာ၀န်ယူမည် မဟုတ်ပါ။
QDDTD will not take responsible for the damaged items inside except packaging.
နယ်ကားလိုင်းများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ကိစ္စရပ်များအတွက် QDDTD မှတာ၀န်‌ဖြေရှင်းပေးမည် မဟုတ်ပါ။
QDDTD will not take any responsible for any damage done by the Highway Express Cars.
စာရင်းသွင်း လာရောက်ယူဆောင်ပြီးသော ပစ္စည်းများအတွက် ငွေပြန်မအမ်းပါ။
Quick will not refund for the items that have been picked up.
ပစ္စည်းလက်ခံသူ လက်၀ယ်ရောက်ရှိပြီးသော ပစ္စည်းများ ပျက်စီး ၊ ပျောက်ဆုံး ၊ကွဲရှမှုသည် ပစ္စည်းလက်ခံသူ၏ တာ၀န်သာဖြစ်ပါသည်။
Quick will not take any responsible for the damage done to the items that have been received by the recipient.
ပြန်လည် အစားထိုးမရသော ပစ္စည်းပေးပို့ပါက ပေးပို့သူ၏ တာ၀န်သာဖြစ်ပါသည်။
It is the responsibility of the sender if the item isavaluable and or irreplaceable.
ပစ္စည်းပေးပို့သူမှ QDDTD ထံသို့ အပ်နှံပြီးသည့် ပစ္စည်းများအတွက် QDDTD ကြောင့်မဟုတ်ပဲ ပစ္စည်းပေးပို့သူ အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့် ပေးပို့ရန်ရပ်ဆိုင်းခြင်း ( မပို့ဖြစ်တော့ခြင်း ) (သို့) ပစ္စည်းလက်ခံသူမှ အသုံးမပြုလိုတော့ခြင်း ၊ပစ္စည်းမှားယွင်းခြင်း ၊ပစ္စည်းလက်ခံသူမှ ငြင်းပယ်ခြင်း ၊ လိပ်စာပြောင်းလဲ ပို့ဆောင်ပေလိုခြင်း စသည့်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့် မပေးပို့လိုသောအခါ (Cancel) ဖြစ်ပါကသွားရောက်ပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်စေ ၊ မပို့ရသေးသော ပစ္စည်းဖြစ်စေ တစ်ကြိမ် ပို့ဆောင်ခကို ပစ္စည်းပေးပို့သူမှ QDDTD ထံသို့ ပေးဆောင်ရပါမည်။
Any changes not from the QDDTD TEAM after QDDTD team have picked up the item from the sender such as no longer want the items to be delivered or the recipient no longer want the items, wrong items, recipient declining to receive the item and sender or recipient wanting to change address such that the sender want to cancel the delivery whether the item is not delivered or it’s in the transit, the sender have to pay QDDTD extra charges.
ငွေစက္ကူ ၊ ရွှေ ၊ ကျောက်မျက်ရတနာ စသည့် တန်ဖိုးကြီး ပစ္စည်းများ၊ ပေါက်ကွဲလွယ်စေသော ဓါတုပစ္စည်းများ ၊ကြွေ ၊ ပန်းတို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းများ ပို့ဆောင်ခွင့်မပြုပါ ။
Quick delivery doesn’t allow valuable items such as Money, Gold, Silver, Jewelry and explosive chemical items, items made from ceramic and glassware.
စာထုပ် ၊ချောထုပ်၊ပစ္စည်းများတွင် ပါရှိသော အချက်အလက်များကို မှန်ကန်စွာ ဖေါ်ပြရပါမည်။လွဲမှားစွာ ဖေါ်ပြမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသောကိစ္စရပ်များကို QDDTD မှ တာ၀န်ယူမည် မဟုတ်ပါ။
The sender is requested of fill the particulars correctly QDDTD takes no responsibility for any dispute happened because of in correct information provided to us.
တရားဥပ‌‌ဒေနှင့် မကင်းသော ပစ္စည်းများကို ပို့ဆောင်ခွင့်မပြုပါ။လိုအပ်ပါက လုံခြုံ‌ရေး အတွက်သက်ဆိုင်ရာ ဖွင့်ဖေါက်စစ်ဆေးခြင်းကို ကြည်ဖြူစွာခွင့်ပြုရမည် ဖြစ်သည်။အကယ်၍ ဥပဒေနှင့် ညိုစွန်းခြင်း ဖြစ်လျှင် ပို့ဆောင်သူ၏ တာ၀န်သာဖြစ်ပြီး QDDTD မှတာ၀န်ယူမည်မဟုတ်ပါ။သက်ဆိုင်ရာသို့ ချက်ချင်း အကြောင်းကြားမည် ဖြစ်သည်။
Quick Delivery doesn’t allow Goods that are prohibited by law. If necessary, for security reasons, the sender have to allow to open the packaging by the authorities. If it is deemed that the item is somehow affecting the law, it will be the responsibility of only the sender. We will Connect to the concern Department immediately.
ပစ္စည်းအားငွေကောက်ခံပေးခြင်းအတွက် ပို့ဆောင်သူမှ QDDTD ထံသို့ ၀န်ဆောင်ခပေးရန်မလိုပဲ Bank (သို့မဟုတ်) Online Payment များအတွက် ငွေလွဲခ ကျသင့်ငွေသာ ပေးချေရပါမည်။
For the collected Payment from the recipient, the sender doesn’t need to pay to Quick Delivery Team for the any charges except for the charges incurred by the bank (or) online payment transfer charges fees.
“Delivery Company ၏ စည်းကမ်းချက်များနှင့် တာဝန်များ”
နယ်သို့ကားဂိတ်မှ တစ်ဆငိ့ ပို့ဆောင်ပေးရပါက ၎င်းပစ္စည်းကို ဂိတ်မှ လက်ခံပြီးစီးသည်နှင့်ပစ္စည်းပေးပို့ပြီးကြောင်း အကြာင်းကြားပေးပို့ပါမည်။
If the delivery has to be done via the Highway Express Car Gate, our team will notify the recipient about the item being accepted by the Car Gate and that the item is successfully delivered to the Car Gate.
ပို့ဆောင်ချိန်၌ဖြစ်သော ထိခိုက်မှု ၊ ပျက်စီးမှုများအတွက်သာ QDDTD မှ သတ်မှတ်ထားသော နှုန်းထားများအတိုင်း တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးပါမည် ။
QDDTD will only take responsible for the damages caused while delivering the item and resolve the dispute as per given terms.
ပုပ်သိုးလွယ်သော စာသောက်ကုန် ၊ ဆေး၀ါးအရည် စသည်တို့ကို အထူး၀န်ဆောင်မှုဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။
We have special delivery service for the damages caused while delivering the item and resolve the dispute as per given terms.
မိမိတို့ပို့ဆောင်လိုသောပစ္စည်းများအား QDDTD မှ အကြောင်းကြောင့်ငြင်းပယ်ခွင့်ရှိပါသည်။၎င်းငြင်းဆိုခြင်းအတွက် အကြောင်းပြချက် မပေးပါ။
QDDTD reserve the right to the cancel the delivery without any reasons.
မိမိတို့ပို့ဆောင်လိုသော ပစ္စည်းများအား Quick Door2Door Application တွင် မိမိကိုယ်တိုင် Register လုပ်ပေးရပါမည်။
You must register the items to be shipped on the Quick Door2Door application.
စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားစဥ်အတွင်းအခြေအနေအရပ်ရပ်ကြောင့်စျေးနှုန်းများပြောင်းလဲခဲ့မည်ဆိုပါက Quick Delivery ရုံးချုပ်၏သဘောထားအတိုင်းစီစဥ်ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။
Quick Delivery reserves the right to make changes on the delivery prices depending on the unforeseen circumstances and the agents are required to abide by the Quick Delivery Head Office's decisions.